Emulators ugu fiican Raspberry Pi | Qalabka bilaashka ah
Emulators ugu fiican ee Raspberry Pi
Waxaa jira taageerayaal badan oo dib-u-dhac ama ciyaaro caadi ah. Ciyaaryahannada ku noolaa da'da dahabiga ah ee sheekooyinka fiidiyowga ee quraafaadka ah sida 'Atari', ama 'arcade bartop games' oo ka socda arcad iyo baararka, ama soo qabtay kumbuyuutaro taariikhi ah sida Commodore64, Spectrum, iwm. . emulators si ay u soo nooleeyaan ciyaartan fiidiyowga halyeeyga ah.
Xitaa haddii aadan ku noolayn waqtiyadaas, laakiin aad u jeceshahay madadaalada dhijitaalka ah, waa inaad ogaataa in Raspberry Pi aad ku abuuri karto qolka ciyaarta, guri arcade ah oo aad u jaban. Xitaa haddii aad tahay sameeye oo aad jeceshahay DIY, waxaad sameyn kartaa kiisas xiiso leh si aad ugu ekeysiiso kumbuyuutarradan, mashiinnada ama mashiinnadii hore ...
1 Qalabka: Raspberry Pi wuxuu dib u habeyn ku sameeyay warshadaha ciyaarta gadaal
2.1 Emulators ugu fiican Raspberry Pi
2.1.6 Buun buuni
2.1.9 VICE (Emulator Qaas ah Commodore)
2.2 Kheyraadka kale
Qalabka: Raspberry Pi wuxuu dib u habeyn ku sameeyay warshadaha ciyaarta gadaal
Raspberry Pi ayaa u yimid isbeddel ku sameeyo waaxda waxbarashada, DIY, iyo sidoo kale tan ciyaaraha gadaal. SBC-gaan yar waxaad ku soo ururin kartaa hal ama in ka badan oo mashiinnada ciyaarta dib u dhaca ah qaab aad u fudud. Qaar ka mid ah awooda Pi ee isbarbar dhiga kombiyuutarada caadiga ah waa:
Qiimo jaban: Raspberry Pi waa mid raqiis ah, kaliya in ka badan you 30 waxaad ka iibsan kartaa mid ka mid ah looxyadan, iyo in yar oo dheeraad ah ka iibso qalab kale sida kaarka SD oo aad ku keydin karto nidaamka qalliinka aad rakibayso iyo emulators-ka, ciyaaraha fiidiyowga, barnaamijyada, iwm. Xitaa waxaa jira xirmooyin badan oo dhameystiran oo aad ku iibsan karto qiimo jaban oo horeyba loogu soo daray wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u abuurto mashiinka pinball-ka, mashiinka arcade-ka ee guriga, ama qalabka gadaal gadaal u dhaca ...
Raspberry Pi Qalabka Dhamaystiran - B07ZV9C6QF
BarTop Replica Arcade Machine oo leh Pi - B0813WHVMK
JAMMA iyo wadayaasha la heli karo: suuqa waxaad sidoo kale ka heli doontaa tiro badan oo koontaroolayaal ah oo ku dayanaya kuwii konsollo ee la soo dhaafay, sida Nintendo's NES, ama kiisaska iyo xirmooyinka kuu oggolaanaya inaad ku sameysid konsole la qaadan karo qaab aad u fudud. Qiimahoodu aad ayuu u jaban yahay, waxayna si fudud isugu soo uruuriyaan mahadnaqa Pi-ga gaarka u ah GPIO ee mashaariicda kale ee kaa caawin kara inaad dhammaysato nidaamkaaga fiidiyowga ciyaarta.
Ciyaarta GamePad ee loogu talagalay Pi - B07TB3JTM2
Joysticks iyo Qalabka Button ee loogu talagalay Mashiinka Arcade oo leh Pi - B07315PX4F
iNNEXT Retro maamusha Nooca Nintendo64 ee Pi - B075SYJTF7
iNNEXT 2 Kumbuyuutarrada caadiga ah ee SNES ee loogu talagalay Pi - B01EA7MVTQ
EG STARTS joysticks arcade iyo xirmooyinka badhamada - B07B66W25M
EG BILAABO 2 joysticks arcade iyo xirmooyinka badhannada - B01N43N0JB
Shaashado la doorto: shaashadda, in kasta oo CRTyadii hore aan la heli karin, haddana waa cunsur kale oo aad ku iibsan karto qiimo jaban oo aad ku dooran karto cabirka ay lahaan karto. Waxa kale oo jira shaashado taabasho oo si gaar ah loogu talagalay Raspi, in kasta oo emulators iyo retro games aysan ahayn kuwa ugu habboon. Way ka fiican tahay isticmaalka mid ka mid ah shaashadda 'IPS LCD' ee ay ku iibiyaan SBC-daan. Ama xitaa ku xir qalabkaaga TV-ga qolka fadhiga ama kormeeraha, iyadoo kuxiran natiijada ugu dambeysa ee aad rabto inaad hesho.
4.3 ”Module Muuqaalka Raspberry Pi TFT - B07FD94BQW
3.5 ”Taabashada shaashadda Raspberry PI - B07Y19QQK8
Qaab-dhismeedka iyo dabacsanaanta: marka lagu daro dhammaan waxyaabaha kor ku xusan, waxaad dooran kartaa waxaad rabto inaad ku darto mashiinkaaga madadaalada, nooca guryaha aad rabto inaad saarto (ku daabac 3D, ka samee alwaax ama waxyaabo kale, rinji, iibso horey loo sameeyay, ...), Xullo cabirka shaashadda, nooca kontaroolada aad isticmaali doonto, iwm.
Kiiska Retro ee jilitaanka Nintendo NES console loogu talagalay Pi - B0787SZXMF
Koofiyad Waveshare loogu talagalay Pi si loo abuuro Console la qaadan karo - B07G57BC3R
Qalabka Waveshare si aad u abuurto GamePi kuu gaar ah - B07XHQMNPC
Koofiyad Waveshare loogu talagalay Qalabka Console ee La qaadan karo - B07PHZ1QNZ
Taasna adigoon ilaawin inaad awoodid isku dar awoodda Raspberry Pi iyo mashaariic kale qalabka bilaashka ah sida Arduino, iyo sidoo kale koofiyado faro badan, aalado dheeri ah, iwm.
Marka laga reebo qalabka, sidoo kale waxaad u baahan tahay barnaamij si aad u maamuli karto ciyaaraha fiidiyowga retro on your Raspberry Pi, sida qaar badan oo ka mid ah cayaaraha caadiga ah loo sameeyay dhufto iyo mashiinno aad uga duwan dhismaha Pi. Taas waxaad ugu baahan tahay emulators si hufan.
Waa inaadan isku qaldin waxa emulator iyo jilid ah. Iyagu isku mid maahan, sidoo kalena ma ahan lakabka iswaafajinta. Tusaale ahaan, adduunka dhabta ah waxaad haysaa tusaalooyin dhowr ah oo ku saabsan dhammaan qeybahan, sida QEMU oo ah emulator ahaan, ciyaarta fiidiyowga ee F1 2017 sida jilitaanka gaariga, iyo WINE oo ah lakabka iswaafajinta.
Un simulator Waa nidaam lagu hirgeliyey qalabka ama softiweerka si fudud loogu heellan yahay dib-u-dhiska deegaan ama soo-saarista hab-dhaqan nidaam dhab ah. Waxyaabo aan wax badan ku lahayn emulator-ka, maaddaama emulator-ka uu yahay hirgelin software ah oo isku dayaysa inuu sameeyo ciyaarta fiidiyowga ama barnaamijka u maleynayo inuu ku shaqeynayo barxad gaar ah.
Waxaan ula jeedaa, emulators fuliyaan qalabka iyo nidaamka qalliinka mashiinka ay damacsan yihiin inay ku daydaan si barnaamijka asalka ah ee barnaamijkaan loogu fuliyo qalabka dhabta ah iyo nidaamka. Tusaale ahaan, qalabkii iyo nidaamkii ku jiray Atari 2600, ama Spectrum, wax yar ayuu ka qabtaa qalabka ku saleysan ARM ee Raspberry Pi.
Taabadalkeed, emulatarayaashan lakab ayaa la soo saaray taas "Tarjun" tilmaamaha iyo wicitaanada Nidaamka lagama maarmaanka u ah in lagu ordo ciyaarta si loogu sii wado Pi-gaaga sida haddii ay tahay mashiinka hooyo. Taas awgeed, emulatorku wuxuu u baahan yahay inuu dib u soo celiyo habdhaqanka CPU, xusuusta, I / O, iwm, ee qalabka, kombiyuutarka, ama mashiinka arcade.
Emulators ugu fiican Raspberry Pi
Ka mid ah emulators-ka loo yaqaan 'Raspberry Pi' oo aad ku maamuli karto ciyaaraha fiidiyowga iyo ROM-yada aad soo dejiso, way istaagi karaan qaar aad u xiiso badan sida:
Waa mid ka mid ah nidaamyada dhameystiran jecel loogu talagalay dadka jecel ciyaaraha retro. Waxay ku habboon tahay Raspberry Pi, Odroid, iyo barnaamijyo kale. Waxay ku saleysan tahay Raspbian, waxayna dhiseysaa saldhig jilitaan dhameystiran si aad ugu raaxeysato cayaaraha aad ugu jeceshahay dadaal la'aan, horayba waad u wada heshay dhammaanteed iyo qalab kala duwan oo qaabeyn iyo habeyn ah.
Hadaad layaabantahay emulators taageeray, waxaad leedahay Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, Atari Jaguar, Atari Lynx, Atari ST, Atari STE, Atari TT, Atari Falcon, Commodore 64, Commodore VIC-20, Commodore PET, Dragon 32, FinalBurn Neo, Famicom, GameCube, Game Gear, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Macintosh, MAME, Sega SD, MegaDrive, NeoGeo, NeoGeo Pocket, Nintendo 64, Nintendo DS, NES, SNES, DOS, PlayStation I, PlayStation 2, PSP, Sega 32X, Nintendo Wii, ZX-81, ZX Spectrum, iwm.
Lakka Waa nidaam dhammaystiran oo hawlgal ah oo ay ku jiraan wax kasta oo aad ugu baahan tahay ciyaaraha dib-u-dhaca waana mid ku habboon guddiga Raspberry Pi. Qalabkan fudud ee 'Linux distro' wuxuu leeyahay xiriir fudud oo saaxiibtinimo waana dhakhso. Ka mid ah emulators-ka aad ku raaxeysan karto waxaa ka mid ah Sega, Nintendo NES, SNES, Game Boy, PlayStation, PSP, Atari 7800, Atari 2600, Jaguar iyo Lynx, Game Boy Advance, Game Boy Color, MegaDrive, NeoGeo, Nintendo 3DS, Nintendo 64, Nintendo DS, iwm.
RecalBox Waa nidaam dhammaystiran si aad uhesho xarun weyn oo warbaahin iyo madadaalo leh dhammaantoodna hal. Waa beddelka xiisaha leh ee kuwii hore, tan iyo markii lagu daro deegaanka oo leh emulators loogu talagalay cayaaraha fiidiyowga, waxaa kale oo ku jira nidaam dhammaystiran oo lagu hirgeliyo dhexdhexaadiye. Sidaa darteed, way fiicantahay haddii aad rabto inaad ku xirto Raspberry Pi-gaaga qolka aad ku nooshahay ee TV-ga.
Inta u dhaxaysa lemulators ee horeyba u ka mid ahaa Xaqiiq ahaan, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxeysato ciyaaraha retro ee NES, SuperNintendo, Master System, PlayStation 1, Genesis, GameBoy, Game Boy Advance, Atari 7800, Game Boy Color, Atari 2600, Sega SG1000, Nintendo 64, Sega 32X, Sega CD, Lynx, NeoGeo, NeoGeo Pocket Color, Amstrad CPC, Sinclair ZX81, Atari ST, Sinclair ZX Spectrum, DreamCast, PSP, Commodore 64, iwm.
batocera waa mashruuc fuliya nidaam hawleed ku takhasusay dib-u-eegista. Waxay ku habboon tahay Raspberry Pi iyo sidoo kale SBC-yada kale ee la midka ah sida Odroid.
Nidaamkan dhammeystiran ayaa isku dhafan tiro badan oo emulators, taas oo ka dhigaysa beddel wanaagsan oo dhammaystiran labadii hore. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku socodsiiso ciyaaraha Retro ee ka socda Nintendo 3DS, Commodore Amiga, Amiga CD32, Amiga CDTV, Amstrad CPC, Apple II, Atari (2600, 5200, 7800, 800, ST, Lynx, Jaguar,), Atomiswave, Commodore 128, Commodore VIC- 20, Commodore 64, DOS, Sega DreamCast, Nintendo Game Cube, Gambe Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Sega Game Gear, Amstrad GX4000, MAME, Sega Megadrive, Nintendo 64, Nintendo DS, NeoGeo, NES, PlayStation 2, Sony PSP, PlayStation 1, SNES, ZXSpectrum, Nintendo Wii, iwm.
Waa a emulator fudud oo loogu talagalay nidaamyada hawlgalka ee MS-DOS si aad uga soo kaban karto fulinta barnaamijyada caadiga ah iyo ciyaaraha fiidiyaha barnaamijkan. Waxaa loo rakibay sida xirmo kasta oo kale oo ka mid ah meelaha keydka u ah qaybintaada Pi. Marka la rakibo way fududahay in la isticmaalo dhawr awaamir oo fududna waad awoodi doontaa inaad maamusho barnaamijka asalka ah ee barnaamijkan hore.
Buun buuni waa emulator kale Software Eltechs loo abuuray si ay u awoodaan in ay maamulaan software sida ciyaaraha fiidiyowga ee dhufto ee x86 ku saleysan. Waa mashruuc lacag la siiyay, laakiin waxay kuu ogolaaneysaa wax ka raaxeysan oo ka fudud isticmaalka QEMU si aad u awoodo inaad ku shaqeyso barnaamijyo aan loo soo uruurin ARM on SoCs of Raspberry Pi.
Waa hirgelinta il furan oo loogu talagalay Linux oo kuu oggolaan doonta adiga inaad ku raaxaysato balwadaha iyo ciyaaraha fiidiyowga badan ee NeoGeo oo caan ah. Waxaa si fudud loo rakibay oo aad si deg deg ah ugu raaxaysan karaan waxyaabaha ku jira. Iyada oo cinwaanno ay ka mid yihiin Mega Slug, SpinMaster, Blue's Journey, Street Hoop, Blazing Star, NAM-1975, Art of Fight 2, iwm
Oo ay la socdaan Commodore, kale oo ka mid ah dhufto ee sheekooyinka waa caanka ah 'Spectrum'. Haddii aad rabto inaad siiso fiidiyowga fiidiyow nolol labaad kooxdan taariikhiga ah, waxaad isticmaali kartaa emulatorka ZXBaremulator kaasoo kuu keenaya emulator dhammaystiran oo bilaa qaawan ah (barnaamij aan u baahnayn nidaamka qalliinka inuu ku shaqeeyo) Raspberry Pi. Waxay ku dayanaysaa Zilog Z80 iyo qaab dhismeedka mashiinadan si ay ula jaan qaadaan ZX Spectrum 48K, 128K iyo + 2A.
VICE (Emulator Qaas ah Commodore)
VICE ama Combian64 Waa mid ka mid ah emulators-yada ugu guulaha badan, maaddaama ay ku shaqeyn karto goobo badan, oo ay ku jiraan Raspberry Pi-kaaga si aad u hirgeliso emulator dhammaystiran oo loogu talagalay C64, C64DTV, C128, VIC20 iyo dhammaan PETs, iyo sidoo kale PLUS4 iyo CBM-II. Haddii aad rabto inaad soo nooleyso barnaamijka barnaamijkan, iyo cayaaraha fiidiyowga, waxaad jeclaan doontaa emulator-kan ...
Waa qalab kale oo aad ku rakibi karto adiga Raspbian loogu talagalay Raspberry Pi oo leh maamulaha xirmada. Marka la rakibo, adoo adeegsanaya qalabka (konsole) waxaad ku maamuli kartaa ROM-yadaada qaab fudud, in kasta oo aadan haysan GUI hadana waxay noqon kartaa mid aad u dhib badan ama soo jiidasho yar bilowga.
Mid kale oo emulators ah loogu talagalay Atari inaad gacantaada ku hayso waa mashruuca Atari ++. Xaaladdan oo kale waa mashruuc ku saleysan Unix oo ujeedkiisu yahay inuu kuu keeno qunsuliyadaha sida Atari 400, 400XL, 800, 800XL, 130XE, ama 5200. Intaas waxaa sii dheer, iyadu iskeed ayey isu-qaabeysaa si ay ugu ururiso barxaddaada, iyadoo ku siinaysa adiga tiro badan oo shaqooyin ah.
Waa emulator kale oo qabow oo ka shaqeeya Raspberry Pi sidoo kale, in kastoo looguma talinayo cusub. Waxay u baahan tahay dejin iyo tallaabooyin taxane ah oo waxoogaa khiyaano u ah kuwa aan khibradda lahayn.
Mashruucu wuxuu u kacayaa sida a Libretro API, oo ah afaafka hore ee emulators iyo retro games kaas oo kuu oggolaan doona inaad maamusho ciyaartan fiidiyowga ah ...
Haddii aad rabto kala soo bax ciyaaraha video-ga, waxaa jira degello internet oo xiiso leh oo ay tahay inaad ka feejignaato. Maskaxda ku hay in emulators ay yihiin gebi ahaanba sharci, laakiin habka loogu talagalay sida aad u hesho ROM-yada ciyaaraha fiidiyowga ma noqon karo. Ciyaaraha qaar bilaash baa laga heli karaa, kuwa kalena taa badalkeeda waxaad u baahan doontaa inaad lacag ka bixiso ama burcad badeed laga dhigo. Laakiin taasi waa masuuliyadaada, maadaama HardLibre aysan dhiirigalinaynin budhcad badeed nooc kasta oo software ah.
Qaar ka mid ah bogagga internetka ee laga helo noocyada noocan ah ee ciyaarta fiidiyowga ee 'ROMs' iyo kuwa la fulin karo, Waxaan kugula talinayaa inaad dib u eegto waxyaabaha soo socda:
Dib -u -noqosho
Ciyaaraha RGB Classic
Ka tagista DOS
lammaanayaal laga tago
Weligood ma jeclaan lahaayeen
Waxaan sidoo kale kugula talinayaa inaad fiiriso Diiwaanka Internetka, Diiwaanka weyn ee dhammaan wixii hore ee shabakadaha shabakadaha halkaas oo aad ka heli doonto macluumaad la dhajiyay iyo sidoo kale barnaamijyo kale oo badan oo retro ah iyo ciyaaraha fiidiyowga.
Waxaan rajeynayaa waxyaalahan oo dhan waad ku filnaan kartaa mustaqbalkaaga mashiinka ciyaarta fiidiyowga ee gadaal ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Raspberry Pi » Emulators ugu fiican ee Raspberry Pi
Tabobar aad u fiican, waxaan fiirinayay alaabta guriga lagu barto, casharrada iyo qaybaha laga sameeyo aniga oo sameeya mashiinka arcade, laakiin waxaan helay shirkad iyaga soo saarta oo aad ayey iigu qaalisan tahay inaan iyaga ka iibsado. Waxaan kugula talinayaa hadii ay kugu dhacdo aniga oo kale, inaad soo iibsato mashiinada arcade-ka oo dhamaantood xambaarsan hadaad hesho soo saare wanaagsan waxaad kuheli kartaa qiimo aad ufiican iyo tayo aad ufiican. Waxaan ku iibsaday MERCAPIXELS waxaanan kula talinayaa 100%. Waxaan kaaga tagayaa isku xirka haddii aad rabto inaad fiiriso, waxay leeyihiin mashiinno waawayn oo qiimo aad u xun leh. http://www.mercapixels.com